FALANQEYN XASASI KOOBAN: Ragga u tartamaya Xilka G kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka DFS Yaa kala wata, Yeyse Musharaxiintan kala taageersan yihiin? | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
FALANQEYN XASASI KOOBAN: Ragga u tartamaya Xilka G kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka DFS Yaa kala wata, Yeyse Musharaxiintan kala taageersan yihiin?
MUQDISHO(P-TIMES)- Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda ku qulqulaya xarunta Golaha Shacabka oo ay maanta ku dooran doonaan labada Gudoomiye kuxigeen ee baarlamaanka Faderaalka, iyagoo shalay doortay Gudoomiyaha oo ay markale u caleemo saareen Prof Maxamed Sh Cismaan Jawaari.
Musharaxiinta maanta u tartamaya gudoomiye kuxigeenka koowaad, waxaa ugu cad cad Faarax Sh Cabdulqaadir, Siciid Xuseen Ciid, Khadiijo Maxamed Diiriye, Mr Muudeey oo isagguna aan dab yar shidey iyo Jaylaani Nuur Iikar.
Dhamaantood musharaxiintan waxaa lagu tirinayaa in ay taageero ka haystaan ragga loolanka adag u gali doono Madaxweyne-nimada dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo midba uu musharax gaar ah wato.
Faarax Sheekh Cabdulqaadir waa saaxiibka koowaad ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu marar badan soo ahaa nin bulshada ku dhex jiray, waxaa lagu tirinayaa in uu si wanaagsan u kala yaqaan galaangalka siyaasadeed ee Xildhibaanadda baarlamaanka ee maanta wax dooranaya, Faarax waxaa la rumeysan yahay in uu qorshihiisa tartankan bilaabay markii lasoo xulayey Xildhibaanada gobalada dalka, rajadiisa saakana ma ahan mid sahlan.
Dadka Rog-rogga siyaasadda ayaa leh Faarax khibraddii uu ka dhaxlay in meesha laga saaro labo Xukuumadoodii iyo Loolankii shalay ee Jawaari soo bixidiisaba wuxuu ka helay khibrad uu maanta ku guuleysan karro.
Khadiijo Maxamed Diiriye waxay taageero ku dhex leedahay baarlamaanka Faderaalka, qoondada haweenka xubnaha ku soo galay ayay ka raadinaysaa codad badan, waxayna taageero dhaqaale iyo mid codeed-ba ka helaysaa Ra`iisulwasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, oo hadda ku jira Loolankii ugu adkaa.
Siciid Xuseen Ciid waa markii koowaad oo uu tartan noocan ah galo, taageero ayuu ka helayaa xildhibaanada ka soo jeeda Puntland & Jubbaland, isagoo sidas oo kale musharax ahaan ku tiirsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda doonaya Madaxweyne-nimada Soomaaliya.
SI TOOS AH U DAAWO DOORASHADA RIIX HALKAAN